Guide dhamaystiran Wareysi School Ilkaha
Best Koorsooyinka DAT Prep
Waa maxay la qiimeeyo at Waraysi ee?
Ha loo Diyaargaroobo
Maxaa keena in ay ku Waraysi?
Waraysi Prep Qalabka
Waraysi Gold School Medical Standard + mmi DVD
Guide Waraysi School Ilkaha
Ilkaha Su'aalaha Wareysiga iyo Jawaabaha la Fahin Full
Helitaanka in Waraysi ay
Ka dib bilood shaqo adag oo ku saabsan codsigaaga iyo baranaya DAT ah, siddo oo aad telefoon iyo call in aad loo sugayay ugu dambeyntii soo gaaray. A wakiilka dugsiga ilkaha waa on dhamaadka kale ee telefoonka aad hambalyo on guulaha aad iyo aad ugu Yeedha waraysi ay dugsiga.
tahay Kibriyey Waxaad tahay inay maqasho warka iyo kala bixiyey sida ugaar dhammaan qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Ka dib markii heerka farax aad yimaado dib hoos iyo aad u dhigay taariikhda waraysigaaga, waxaad la Yaabteen "Maxaan in haatan sameeyo si ay isugu diyaariyaan aan waraysi?"
Waxa kaliya ee aad leedahay dhowr toddobaad ama ka yar inaad ogaato sidaad si aad u hesho si aad waraysiga iyo sida loo diyaariyo, waayo,. Waxaad iman meel aad u fog oo dhammaystiray aad u badan in ay wax wanaagsan ma samaynayno wareysiga aad iyo naftaada siin fursadda ugu fiican ee helitaanka dalab aqbalaada ah.
Sida aad ku qaatay waqti badan u diyaar DAT ee waxgarasho format imtixaanka iyo waqtiga, aad u baahan tahay inaad wakhti galiso isku diyaarinta waraysiga iyo in la fahmo ay format. Waxaan idiin qaadan doonaa iyada oo wax kasta oo aad u baahan tahay si ay u eegaan oo sameeya si ay u diyaariyeen inay burburin waraysiga dugsiga ilkaha!
Maxaa keena in ay ku Waraysi
The wareysi dugsiga ilkaha waa fursad mid ka mid ah in aad leedahay sida codsadaha ah in aad iskaaga u iibiso oo la dhiso xiriir ah la dugsiga ilkaha. Waxaa fursad kaliya ee aad ka heli si aad u aragto dugsiga oo la kulan macalimiinta ee qofka. Wareysiga go'aan ka gaari kara in aad hesho dalab aqbalo ama ma. Waxaa muhiim ah in si fiican loo sameeyo iyo in si buuxda loo diyaariyey.
dugsiyada ilkaha badankood waxay bilaabaan wareysanaya codsadayaasha ee September ugu horrayn iyo in sidaas la sameeyo iyada oo loo marayo dhamaadka March sii, laakiin mararka galay April iyo May. Wareysi caadi ahaan oo kaliya lagu qabtay maalmaha shaqada si ahaan diyaar u tahay inay ka maqnaan qaar ka mid ah dugsiga ama shaqada si ay u soo qeyb galaa wareysiyada. Ka dib markii la ogeysiiyo aad martiqaad si ay waraysi aad xulan doonaa taariikh haddii in ka badan hal doorasho diyaar u yahay inuu waraysi dugsi. maalmood Waraysiga waxaa caadiyan la qabto dhamaadka toddobaadka on Friday ah, laakiin sidoo kale laga yaabaa in lagu qabtay on maalmood oo kale inta lagu jiro toddobaadka ku xiran dugsiga.
Dugsi kasta waa ka duwan yahay sida ay wareysiyo iyo sida badan ardayda waxay leeyihiin wareysi waqti. dugsiga A yeedhi karaa oo kaliya sacab muggiis oo codsadayaasha inay wareystaan ​​ama waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin konton ama ka badan codsadayaasha oo dhan wareysanaya isla maalintaas. Tani waxay kala duwanaan doontaa by dugsiga. Caadi ahaan dugsiga ilkaha waraysi 3-4 ardayda halkii kursi heli karo dugsiga in. Tirada wareysiyada ay bixiyaan dugsiga kala duwanaan karaan iyo sidoo kale.
celcelis, ku saabsan 30-40% ardayda la waraystay ayaa la aqbali doonaa dugsiga ilkaha. Tani waxay sidoo kale kala duwan by dugsiga iyo dugsiyada qaar ka mid ah, sida University of Pacific, ayaa heerka aad u dheer aqbalaada bixisaa siiyo ardayda la waraystay ee dugsiga. Dugsiyada aqbali doonaa ardayda ka badan si dhab ah dhigan karaan dugsiga, maxaa yeelay arday badan ayaa la aqbali doonaa dugsiyada kala duwan oo hoos u soo celin doonaa dalabyo qaar ka mid ah aqbalaada.
Dugsiyada badankoodu waxay caadi ahaan ku siin doonaa muddo kama dambaysta ah ee waqtiga, sida 30 maalmood dul aqbalo, ardayga in ay doortaan in la aqbalo dalabka aqbalaada ee dugsiga. Oo ay la socdaan waqtiga waa in ardaygu leeyahay in ay ka jawaabaan gudahood ah, ardayga ayaa sidoo kale u badan tahay yeelan doonaan in ay meel deebaaji hoos loo hayo ay kursiga marka aqbalay dalab dugsiga ilkaha. deposit Tani caadi ahaan waa dhowr boqol oo doolar oo waa non-celin.
Maxaa yeelay, xafiiska kasta ogolaanshaha go'aamin doona inta musharax ayaa la qorsheeyay maalin gaar ah waraysi, Qaab dhismeedka waraysiga wuxuu ku xirnaan karaa imisa waraysanaysa la qorsheeyay in ay la kulanto, iyadoo musharaxiinta. Wareysiga dhabta ah caadi ahaan hayaa inta u dhaxaysa 15-60 daqiiqo oo la fulin karaa in qaabab kala duwan oo aan taaban doonaa ka dib.
Wareysi wuxuu bixiyaa dugsiga fursad si aad u qiimeeyaan sida codsadaha ah ee qofka. Sida codsadaha ah dugsiga ilkaha aad kaliya u jiraan dul warqad ilaa waraysiga. Wax walba oo ku saabsan codsigaaga, dhibcaha aad, fasalada, guulaha, adeegga, iwm, waa waxa aad kasbada martiqaad wareysiga dugsiga ilkaha. Waraysi fursad u yahay dugsiga si aad u aragto oo aad u ogaatid waxa ay ma baran kartaa adiga kugu saabsan ka codsigaaga.
Qof kasta oo la wareeysto kasbatay fursad ay ku wareystaan ​​by taas oo noqotay habka codsiga dib u eegista iyo la siiyo wareysi. Wax macno ah ma waxa aad GPA ama dhibcaha DAT yihiin halka wareysanaya, aad u dhigay ee la soo dhaafay cut ugu horeysay oo dugsiga ilkaha uu doonayo in uu arko qofka aad tahay qof hadda iyo haddii aad hantiyi xirfadaha lagama maarmaanka u ah dhakhtarka ilkaha. Qof kasta in wareysiyo waa muhiimad heer siman iyo wareysiga waa markii u iftiimiyo iyo inta ka taagan.
Waan ogahay musharixiinta aad samayseen aad u fiican dugsiga iyo DAT iyo heshay wareysi badan oo bixiya dugsiga, laakiin aan la aqbali ee dugsi kasta, sababtoo ah waxay ku dhibtooday wareysiyo ay. Waxay laga yaabaa in ay buugga smart oo wax fiiriyey weyn warqad, laakiin waxay ku dhibtooday in waraysiga oo u baahnaydeen xirfadaha in dugsi ilkaha doonayo in musharax. Waxa kale oo jira soo horjeeda, Codsadayaasha aan u muuqdaan in ay ugu qalma warqad, weli ay si fiican u sameeyaan inta lagu guda jiro waraysiga oo ay leeyihiin xirfadaha in dugsi ilkaha uu doonayo si ay u helaan aqbalay. Waxaa runtii muhiim ah in la diyaar ah iyo sidoo kale sameeyo waraysiga.
Marka aad tallaabo cagta dugsiga ilkaha waraysiga ayaa ku soo bilowday xitaa haddii aadan la hadlay qof weli. Waxaad la qiimeyn doonaa qof kasta oo dugsiga in – macalimiinta, shaqaalaha iyo ardayda. Had iyo jeer noqon xirfad iyo ixtiraam leh! Noqo xirfadeed ee dhammaan goobaha waraysiga oo dhan.
Haddii aad qabto qadada ardayda ilkaha ka dibna sii wadaan in ay noqon xirfad iyo ixtiraam ku soo wajahan. Ha ka hadlaan sida nolosha xisbiga maqan tahay dugsiga, ama weydii sida badan gabdhaha kulul waxaa jira dugsiga. Waxaad had iyo jeer lagu qiimeeyo qof ee dugsiga. The ardayda ilkaha ku wareysanaya sida aad wax cunaya qado iyaga la ama uunana socod campus iyaga la. Waxay iyo mararka qaar sheegi kartaa doonaa maamulka ku saabsan musharixiinta wareysanaya ee dugsiga iyo warbixino kuwaas oo kaa caawin kara ama dhaawici musharixiinta.
Inta maalinta wareysiga dugsiga ilkaha ee aad la qiimeyn doonaa xirfado gaar ah, xirfadaha in dugsi ilkaha caadi ahaan qiimeeyaa yihiin:
Xoogiisa iyo Mas'uuliyadda
Skills Strong Shakhsiyadeed
Dexterity iyo garasho Skills
Tani ma aha daruuri liiska gabagabo ah ee xirfadaha waxaa lagu qiimeyn karaa waraysiga, laakiin kuwani waa xirfadaha dugsi ilkaha jecel in ay arkaan in musharax. dugsiga A ilkaha doonayo in la ogaado in: aad tahay oo awood u xalinaayo load a dabcan culus oo walaac dugsiga ilkaha, aad wax ku ool ah dadka kale la xiriiri kartaa, aad tahay is-kalsooni, wax idinka Adkaan oo caqabado, aad si fiican u shaqeeyaan kuwa kale oo ay goob koox, aad leedahay dexterity Buugga iyo xirfadaha awooda garasho, iwm. Kuwani waa qaar ka mid ah xirfadaha muhiim ah in la qiimeyn doonaa.
Waxaad u baahan tahay in loo diyaar garoobo waraysigaaga. Marka aad ogaatid meesha aad la wareysanaya doono ka dibna aad u baahan tahay si ay u bilaabaan diyaarinaya dugsiga in. Dugsi kastaa waa mid gaar ah oo aad u yeelan doonaan in ay si ka duwan u diyaar garoobaan dugsi kasta aad wareysi at. Waxa ugu fiican in la sameeyo si ay u bilaabaan diyaarinaya waraysiga waa in aad la xiriirto la taliyaha caafimaadka pre-ama xiriir iskuulka si toos ilkaha iyo aad u ogaato wax kasta oo aad awoodo oo ku saabsan geedi socodka waraysiga.
Waxaa laguu soo diri doonaa macluumaad ku saabsan waraysiga, laakiin haddii aad weli qabto wax su'aalo ah ka dibna la xidhiidh dugsiga si aad u ogaato. Waxaan sidoo kale la xiriiri lahaa qoyska ama saaxiibo in ay u tageen inay dugsiga ama aqoon u leh. La xiriir qof aad ogtahay in ku nool degaankaas oo arka haddii ay kula wadaagi kartaa wixii macluumaad ah oo ku saabsan dugsiga ama xataa meesha. Ogow wax walba oo aad awoodo oo ku saabsan dugsiga iyo meesha dugsiga ku yaal.
Waa in aad xiiso u muujiyo in dugsiga iyo meesha at kaas oo aad waraysanaysid. In badan oo aad ogaato oo ku saabsan dugsiga iyo aagga ku dheeraad ah oo ku tusi doonaa inta lagu guda jiro wareysigaaga. dugsiga A ilkaha waxaa laga yaabaa in ku faraxsan musharax oo dhab ahaan doonayaan iyaga inay u yimaadaan si ay dugsiga, laakiin haddii musharaxa uma muuqato in ay wax ku saabsan dugsiga ogaan iyo muujinaysaa inta lagu guda jiro waraysiga wax dan ah waxa ku jira ka dibna ay u badan tahay waa lumin doonaa, oo aad danaynayso in. The more ugu faraxsanahay oo xiiso aad ku sugan tahay dugsiga in ka badan dugsiga u baahan doontaa in aad halkaas tago.
Dib u eeg codsigaaga ka hor waraysigaaga, waxay ogaan gudaha iyo dibaddaba. Waxay u badan tahay in lagu weydiin doonaa su'aalo ah ee aad ku salaysan waxyaabaha aad soo gudbisay iyo macluumaadka codsigaaga. naftaada garanayaan oo ay awoodaan si ay u sharxaan awoodaha gaarka ah in aad hoggaamiye wanaagsan ka dhigi. La wadaag danahaaga, oo ay ku jiraan waayo-aragnimo tabaruc ama waxqabadyada in aad qofka si fiican loo sameeyey fekrado. Ogow sababta aad u rabto in aad dugsiga ilkaha u tag. Awoodaan in ay si cad oo kalsooni leh u wadaagaan sababta aad u raad-xirfad this.
Ogow nooca wareysi lagu qaban doonaa dugsiga. La xiriir dugsiga ama kuwa u yaqaanaan dugsiga oo waydii waxa format wareysiyo waxaa si sax ah waxaad soo diyaarin kartaa. nooc kasta oo wareysi baahan yahay diyaarinta kala duwan.
Maxaad meesha ugu fiican ee aad for waa dugsi ilkaha this? Waa in aad ogaato sababta oo ay awoodaan inay si cad u muujiyaan in waraysiga. Baaritaan dugsiga iyo wax ka bartaan oo ay manhajka, Professor, tababarka qaaska ah, iwm. Waxaad u baahan tahay si ay u awoodaan inay ka dhaadhiciyaan waraysanaya(s) sababta ay tani meesha idiin yahay.
Si fiican u baro arrimaha muhiimka ah ee ilkaha iyo dhacdooyinka ee hadda ka dhacaya dunida. Show in aad maal ilkaha oo waa musharax iyo sidoo kale-fekrado. waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo in aad su'aalo ku saabsan arimahan, sida bixiyeyaasha heerka dhexe, ama waxaa lagaa codsan karaa inaad ku saabsan dhacdooyinka ee hadda, sida dagaalka lagula jiro argagixisada. Ma ogid waxa lagugu waydiin karaa inta lagu guda jiro waraysiga, laakiin waa inaad u diyaargarowdaa oo muujinaya in aad tahay dareen ah oo ku saabsan ilkaha oo si wanaagsan loo-soo koobay.
Kuwa waraysiga ah sida caadiga ah waa awood dugsiga ilkaha in ka qayb habka ogolaanshaha. Dugsiyada qaarkood waxay leeyihiin doonaa ardayda ilkaha ama Qalinjabiyeyaasha rasmi ah ku lug leh qiimeynta waraysi ama aan rasmi ahayn inuu ku soo shirtago su'aalo guud oo ku saabsan dugsiga. Admissions, arrimaha ardayga iyo shaqaalaha gargaarka lacageed ayaa sidoo kale mar mar caawiyo wareysiyo.
Ka hor inta aadan wareysi haddii ay ku siiyaan macluumaad kasta oo ku saabsan waraysiga ama awood ka dibna waxa ay baran fiican si aad u hesho macluumaadka asalka qaar ka mid ah oo ku saabsan shakhsiyaadka, kuwaas oo. Haddii ay wax ka wadaagaan kula markaas loo hubiyo in la helo hab lagu keeni in inta lagu guda jiro wareysigaaga. In la dhiso xiriir ah la leedahay waraysanaya(s) oo caawiyaan arki sababta aad taam kaamil ah ay dugsiga. Tani waxay noqon doontaa si waxtar leh idinka iyo xir kartaa heshiiska idiin on is aqbalo dugsiga.
Dugsiyo badan ayaa samayn doona wareysiyo "file furan". Taas macnaheedu waa in qiimeeyaha yeelan doonaan fursad ay ku eegaan codsiga AADSAS iyo codsiga dugsiga sare ama qalabka dheeraadka ah maalin ka hor kulan kula. habkan, waraysanaya heli kartaa aragti waxa aad miiska soo wada hadalka iyo sahamiyaan waxyaalaha aasaaska ah ee codsigaaga si qoto dheer ka weyn. Dugsiyada qaarkood waxay faquuqi karaan qoraalka ama dhibcaha DAT markii qaybinta aad file si waraysanaya ah looga fogaado doonaa fixating on fasalada hooseeyo inta lagu guda jiro waraysiga.
dugsiyada kale qaban doonaa wareysiyo "file u xiran yihiin". In format this, qiimeeyayaasha ee waraysi musharax kasta oo aan eegaya oo dhan at file codsadaha. Maxaa yeelay, qiimeeyaha waxaa tiray in codsigaaga, wadahadalka la filayaa in ay noqon more organic iyo shidaal.
Mararka qaarkood qofka ku wareysanaya ah waxay yeelan doonaan in ay helaan aad file laakiin door bidaan doonaa oo u dib u eegaan ka dib markii aad la waraysanayo. habkan, waraysanaya in uu ku garto qofka ka hor dib u codsigaaga dhan warqad. waraysiyo Farsamo sida waxaa loo tixgeliyaa "file furan" inkasta oo hadalka la sameeyay "xiran-file."
qaab kale oo uu soo helo caan yahay "badan mini-wareysi" (mmi). Kiiskan, musharaxiinta isku shaandheyn dhexeeya saldhigyada kasta 7-10 daqiiqo yihiin halkaas oo ay hor su'aal cusub. Qaar ka mid ah su'aalaha la xiriira waxaa laga yaabaa in la xaalad halka qaar kalena waxaa laga yaabaa in hawl-oriented. musharax kasta waxaa la siin su'aal isku mid ah ama seenyo, iyo mid kasta oo xaakinnada qiimeeyaha musharax kasta su'aasha gaar ah in la waydiiyo. qiimeeyaha ayaa sidoo kale laga yaabaa in la falgalaan musharaxa iyada oo su'aalo dabagal.
dhaqan, waraysiga ayaa sameeyay la mid qiimeeyaha su'aalo hal musharax. Mararka qaar wareysiyada ayaa la sameeyay iyadoo guddi ka kooban laba ama saddex qiimeeyeyaasha musharax kasta. waraysiyo Panel sidoo kale isku daraan laga yaabaa in qaabab file "furan" iyo "u xiran yihiin" sida mid ku waraysanaya guddi laga yaabaa in ay helaan aad file halka ka kalena waa la engejiyey, in aad file.
More dhawaan, Dugsiyada qaar ka mid ah waxay qaateen qaabab wareysi in la abuuray si ay u qiimeeyaan dhaqdhaqaaqa group more wareysi. Sidaas darteed, waraysiyo group, taas oo qiimeeye weydiiyo su'aalo saddex ama in ka badan musharaxiinta, waxa ay noqonayaan more caadi ah. Mararka qaarkood waxaa jira qiimeeyaha labaad oo kaa caawin kara fududeeyo wada-.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo waraysiyo iyo dugsi kasta waa mid gaar ah sida ay wareysigii ugu. Raadi hore nooca wareysi la qaban doonaa ka dibna u diyaariso, waxaa ka. Waxa ay noqon doontaa mid aad u waxtar leh in la qabto wareysi ku majaajiloodaan hore in la sameeyaa si la mid ah in aad leedahay doonaa wareysi dhabta ah.
Sameynta sidoo wareysi ku saabsan tahay isagoo Xidhiidhiye wax ku ool ah, mudnaanta dhibcood aad rabto in aad samayso oo ay awoodaan in ay miyir ku hadasho oo ku saabsan mawduucyada aan daruuri ma aha jawaab sax ama khalad ah.
qiimeeyeyaasha Waraysi inta badan waxay leeyihiin hawsha weydiinaya musharaxiinta la mid ah ama su'aalo isku mid ah si ay u oggolaadaan in qiimeeyaha si caddaalad ah jawaabaha musharax kasta xukumi. Su'aalo dadku wada qabaan in ka mid ah ayaa la filayaa, "Isku kay sheeg,"" Aqoonso tabar weyn,"Iyo" Waa maxay sababta aad u xiiso ilkaha?"Qiimeeyeyaasha qaarkood waxay leeyihiin go'an pre-maagganaa su'aalo loo baahan yahay in weydiin musharax kasta halka qaar kalena ay shaqaaleeyaan style a more sheekaysanayo halkaas oo su'aalo ayaa la weydiiyay degna.
Waxaan wada saaray liis su'aalo ah oo la weydiiyey in wareysiyo dugsiga ilkaha. Dib u eeg liiska this, qor muhiimsan in aad rabto in aad ku dhacay on halka jawaabista su'aalaha, iyo ku dhaqmaan ayaa u jawaabay oo qof ama in xataa aad muraayad musqusha. Waxaad ka heli doontaa in aqlabiyad aad jawaabo u tag mawduucyada isku soo laabtay. Tusaale ahaan, waxaad qaadan kartaa su'aalaha ugu heli iyo hab si ay dib u wadin inuu muujinayo awoodiisa aad.
Marka aad la hadli kartaa waxyaabaha ku saabsan kartida aad ku sheegi kartaa sababta kuwa meelaha adiga oo la hadlaya oo ku saabsan waayo-aragnimada iyo Sunogoogga aad iskaa wax u qabso ama waayo-aragnimada clinical. Xusuusnow in ay xoogga saaraan kuwa xirfadaha muhiimka ah in dugsiga ilkaha doonayo in musharax oo la dhiso xiriir ah la leedahay waraysanaya(s) waqti isku mid ah.
Halkan waxaa ku qoran liiska su'aalaha lagu weydiiyay wareysiyada iyo waxaan gelin su'aalo muuqan badan wareysiyada ugu sareysa ee liiska.
Isku kay sheeg.
Maxaad aad rabto in aad dhakhtarka ilkaha?
Maxaad u malaynaysaa in aad ka dhigi lahaa ilkaha wanaagsan?
Maxaad samayn lahayd haddii aad mid ka mid ah saaxiibada kuu dhow arkay in aad qish fasalka ilkaha on tijaabo?
Sidee aad waayo aragnimo fiican u dhigma la hadal shaqada ee dugsiga?
Maxay yihiin saddex xoogga weyn iyo saddex liito weyn? (Tani waa su'aal adag in laga jawaabo iyo waxa la weydiiyay badan waraysiyada. Jawaabta inta badan caadi ah in ardayda loo siiyo waa in ay isu qaadin walax aad u badan noloshooda iyo naftooda duugoobin. Tani waa jawaab fiican, laakiin iyaguna way maqli waqtiga oo dhan. Waxaan isku dayi lahaa in la ogaado dhawr liito naftaada in in ay yihiin run liito, laakiin aan wax in aad eegto xun. Iska ilaali waxyaabaha sida: Waxaan mar walba soo daahay oo aan diyaargarayn ahay, ama aan wahsasho badan.)
Maxaad dugsiga ilkaha?
Bal ii sheeg oo ku saabsan waqtiga la .... Waxaad lahaa si ay uga shaqeeyaan koox? Lahaa in ay dhibaato ka qaban? Xalin dhibaato? Ahayd in ay noqdaan hogaamiye? Miyeyna ahayn ka dhergiyey waxqabadkaaga? Lahaa in ay go'aan adag?
Ma waxaad u lahaa waayo-aragnimo wax kasta oo la ilkaha? Waa maxay leedahay waxaa idiin baray oo ku saabsan xirfadda? Maxay taam sax kugu ah?
Maxaad kala inta kale ee codsadayaasha ah?
Waxaan aad jeceshahay laakiin waxaas oo dhan u muuqataa weyn, laakiin waxa aan noqon karo iyo dib u sheegi guddiga ogolaanshaha in qanciyo doonaa oo aynaan ka aad rabto in aad fasal our socda?
Maxaad ka codsan dugsiga ilkaha our?
Waa maxay nooca barnaamijka ilkaha waa in aad xiisayso?
Maxaad u malaynaysaa ku saabsan dugsiga (ie. hiilaadka, barnaamijka)?
In la soo dhaafay, waxa kugu dhacay ayaa saameyn ugu weyn ee ku saabsan nolosha?
waxaad ku sheegi kartaa (A-F) fasalka aad heshay fasalka this?
Waxaan ogaaday in aad fasalka ku noqday, sababta?
Muxuu aad go'aansato in aad waaweyn ee…?
fasalada Your simbiriirixan aad ___ semester, sabab kasta?
Ilkaha u baahan heshiis weyn oo isuduwidda gacanta. Ha aad qabto wax waayo-aragnimo ku habboon?
Ma u malaynaysaa in doorka dhakhtarka ilkaha ayaa la bedelay, iyo sida si?
Ma tixgelin aad codsaneysid dugsi caafimaad?
dugsiga sababta aan caafimaad ama xirfad kale oo caafimaad?
Haddii aad lacag aan xad lahayn, waayo, maalintii wixii aad samayn lahayd leh?
Haddii aad loo rarayo, maxaad u malayn of goobta dugsiga ee?
Sidee asxaabtaada / qoyska fal aad u xiiso in ilkaha?
Ha aad qabto wax saaxiibada ama qoyska kuwa ilkaha?
Ma leedahay qorshe kasta oo ka dib markii qalin jebinta?
Maxaa ka dhigi lahaa inaad ku faraxsan 10 sano laga bilaabo waqtigaan?
Haddii aad wax ku saabsan naftaada beddelo, waxa uu noqon lahaa?
Sidee baad ku qaataan wakhtiga aad firaaqada?
Maxaad samayni oo aad in aad isku dejiso?
Sidee kula tahay xirfad ilkaha ayaa la bedelay ka badan la soo dhaafay ka 25 sano?
Maxaa buug aad dhawaan ka akhrisan?
Waa ayo qoraaga aad ugu jeceshahay?
Waa maxay noocyada buugaag aad ka heshaa reading?
Maxaad dhihi lahaa ay ahayd maalintii ugu fiican ama waayo-aragnimo aad waligaa?
Maxaad sameyneysaa marka aad carabka ku soo baxay?
Sidee baad naftaada arki, waa maxay astaamaha wanaagsan?
Haddii aad ku yeelan karto casho ah la qaatay laba qof kasta oo aan kaaga qisoonay iyo waxaa ka mid dhintay ama noolyahay, kii waxa uu noqon lahaa iyo sababta?
Your wareysi waa in ay xaqiijiso dugsiga kugu habboon. Waraysi ma aha oo kaliya fursad dugsiga ilkaha in aad waraysi, laakiin si aad u wareystaan ​​dugsiga ilkaha. Waa inaad isku daydaa inaad naftaada u malayno in dugsiga iyo magaalada. Waxaad halkaas ku noqon doonaa ugu yaraan afar sano. Sidoo kale, fiirsan nooca waayo-aragnimada aad rabto in aad leedahay inta aad halkaas, oo ay la socdaan qiimaha iyo sida aad doonaa in la bixin waayo,.
Ku dhawaad ​​guud, wareysanaya wuxuu ku dhamaan doonaa wareysiga by weydiinta, "Ha aad qabto su'aalo dheeraad ah ?". By marayso aad daalan tahay, oo waxay noqon lahayd in ka badan ku faraxsan yahay in aan la weydiisan wax su'aalo ah oo dheeraad ah. Laakiin ... ma burburisay waraysiga ilkaha by jawaabay "Maya, Anigu ma aan samayn ". Waxaa muhiim ah si loo soo afjaro wareysi ilkaha hab wanaagsan weydiinta su'aasha soo dhaafay ugu yaraan hal si ay u muujiyaan aad xiiso dhab ah in ay dugsiga. Si kastaba ha ahaatee, ma weydiin su'aalo ee aad hore u jawaabay inta lagu guda jiro waraysiga oo ay ixtiraamaan waqtiga aad ku waraysanaya ee aan weydiinaya su'aalo aad u badan oo dhamaadka.
Halkan waxaa ku qoran tusaale oo qaar ka mid ah su'aalaha wanaagsan si aad u weydiiso marka la soo gabagabeeyo wareysi:
In aad opinion, waxa aad dhihi lahaa ardayda ilkaha sida ugu saabsan dugsiga ilkaha aad?
Waxaan leeyahay xiiso in ilkaha ______ (la isku qurxiyo ama wax kasta oo aad waxaa laga yaabaa xiiso). Ma fikradaha ______ ilkaha lagu daro manhajka ilkaha ee dugsiga?
Ma waxaad arki wixii isbeddel la taaban karo manhajka ilkaha dugsiga gudahooda ee sannadka soo socda ama laba?
Waa maxay fursadaha ardaydu ilkaha leeyihiin inay ku baaqaan in mashruuc cilmi-baaris ah inta lagu guda jiro waxbarashada halkan?
Ma ardayda ilkaha isku shaandheyn ku dhex noocyada kala duwan ee rugaha ilkaha sida rugaha caafimaadka ilkaha VA, magaalada gudaha rugaha daryeelka ilkaha, Xafiisyada ilkaha ee gaarka loo leeyahay, iwm?
Waa maxay barnaamijyada qaaska ah waxaa laga heli karaa?
Waa maxay saamiga arday-to-kuliyadda?
Waa maxay xajmiga fasalka celcelis?
Waa maxay habka sixida? Ma u gudbin / guul dareysato ama waa fasalada warqad soo saaray?
aad dulmar karaa waxbarashada la filayo iyo kharashyada?
Waa maxay dhaqanka ee dugsiga sida?
Sharaxaad ka bixi waayo-aragnimada bukaan ah - marka waxay bilaabaan oo noocee ah bukaanada samayn Annagu waxaannu u adeegi?
Ma jiraa maalgelinta cilmi heli karaa?
Waa maxay imtixaanada guddiga gobolka sameeyo ardayda aad qaadato?
Dugsigu ma isticmaali technology soo baxaya?
fasalada wax laga qaadi doono ardayda caafimaadka?
Waa maxay siyaasadda ku saabsan ka qeybgalka dhacdooyinka ka baxsan ururrada sida Asda?
Waxa kale oo jira su'aalo ay tahay in aanad weydiin dhamaadka waraysiga. Su'aalo muujinaya kalsooni darro naftaada ama la'aanta hamiday iyo go'an tahay in ay dugsiga ilkaha waa in si xaqiiqo ah in laga fogaado. Kuwani waa su'aalaha in aad codsan kartaa qof kale in uu yahay gudaheedana sinaba uma ay lug leh wareysiga dugsiga. Halkan waxaa ku qoran dhowr tusaale oo su'aalo xun waa in aad ka fogaato weydiinaya:
Sidee dheer waa fasaxa xagaaga u dhexeeya sano koowaad iyo labaad ee dugsiga ilkaha?
Imisa maalmood oo fasax ah aan ka heli?
waxaad ii talin karaan haddii aan awoodo inaad dib u bixiso daymaha dugsiga ka dib markii aan qalin-noqon doonaa?
Waa maxay fursadaha aqbalaada aan barnaamijka ilkaha?
Sidee ayuu GPA barbardhigi dadka kale in aad waraysanaysid?
Ma score DAT aan ku filan sare?
Dhamaadka waraysiga weydiiso kaarka ganacsi ka qof kasta oo aad la waraystay la. Markaas waxaad soo diri mahadnaqid ah kaarka si qof kasta. U sheeg inaad mahad fursad ay ku wareystaan ​​dugsiga. Dib-u-xoogga saaraan waxyaabaha aad xiiso ku saabsan dugsiga iyo this sidoo kale waa fursad si aad u weydiiso wixii su'aalo dabagal laga yaabaa in aad leedahay.
musharax badan oo wareysanaya jeclahay in aan keeno buugaagta iyo xilal iyaga la waraaqaha soo bandhigtay ay la daabacay, sawirrada shaqo hal abuur leh ama resume ah updated. Waa in aad dugsiga in idiinku yeedhi inaad waraysi ku saabsan la door ku wajahnaa keeno qalab dheeraad ah si aad waraysiga u hubiso.
Halkan waxaa ku qoran a talooyin dhawr wax idin keeni kartaa si aad u hubiso in maalinta wareysiga aad u dhaco sidii habsami sida ugu macquulsan.
Book: maalmood Waraysi inta badan ku lug badan oo safraya iyo sugitaanka. Ka dib markii uu yimid dugsiga ilkaha, aad waa in aanay noqon on your phone, waa in aad la akhriska iyada oo loo marayo macluumaad ah in aad la siiyey oo dhan. Haddii aad akhrido wax walba oo weli waxay leeyihiin waqti, si loo dilo oo aad had iyo jeer laabi kari waayay baxay buug wanaagsan. Waa ma aha oo kaliya ku siin doonaa wax in la sameeyo ka hor maalinta wareysiga aad bilaabo, laakiin waxa ay sidoo kale noqon kartaa bilow ah wada hadal weyn. Si kastaba ha ahaatee, hal mar maalintii bilaabmin, sidoo kale waa fikrad wanaagsan in ay bulshada iyo aad u hesho in la ogaado kale la wareystay.
Mirror: Aadan rabin piece of bagel xayiran ilkaha ka quraac in ay aragti ugu horreeya ee aad ka dhigi. Indho deg deg ah muraayad ka hortagi kara in ka dhacaya.
mintiyada: Mararka qaar wareysiyada waa xaq cuntada ka dib. Ka dib markii in la hubiyo ilkaha waa samaynaysaa nadiif Hubi in neefta aad u baxo fikrad wanaagsan. Sidoo kale, bixiya mintiyada aad la shaqayn jiray la wareystay waxay waa hab sahlan in la sameeyo saaxiibo. Waxa fiican in ay leeyihiin, reexaanta ah ee afkaaga ka dibna in ay xoogaa yar oo xanjo. Waa tacky in xanjo wareysi sidaa darteed ma uu samayn, aadan rabin in la sameeyo aragti xun ku waraysanaya by sidiisii ​​on xanjo.
Cunto fudud: waxaa laga yaabaa inaad aad u walwalsan in ay cunaan quraac, oo waxaa sida caadiga ah waa jadwal buuxiyey ka hor inta qadada. Waxaad ku farxi aad qabto cunto fudud oo aad kula doonaa, dhacdo in caloosha bilaabo xiinka dhowr daqiiqo ka hor waraysigaaga bilaabo.
Wax dheeraad ah in lagu daro in codsigaaga: Fursadda waxaa aad ku samaysay wax cajiib ah tan iyo markii codsigaaga gudbisatay, ama ay jiraan wax aad ka hor in aadan ku haboon yahay inuu dalabka AADSAS aad. Lahaanshaha wax ku darto in ay codsigaaga inta lagu guda jiro wareysigaaga tusi doonaa in aad weli la adag u shaqeeyo oo ay leeyihiin xataa more in ay bixiyaan sidii codsade. Tusaalayaal ka mid ah mashruuca iskaa wax u qabso ah oo ka shaqeeya aad tahay on, maqaal aad qoraal ah, ama update ah si ay baaritaan aad la qabanayo.
Pen & warqad: Waxaa lagu siin doonaa macluumaad badan oo ku saabsan dugsiga in aad u baahan doontaa in aad qorto iyo xusuuso in aad. Sidoo kale, ardayda kuliyadda iyo ilkaha inta badan ku siin doonaa cinwaanada email ay dhacdo in aad qabto wax su'aalo wareysiga ka dib. Lahaanshaha qalin iyo warqad aad on hubaal iman doonaa anfacaya.
marsho Weather: Dugsi kasta oo aad qaadan doonaa on safar goobaha ay, qaar ka mid ah kuwaas oo ka mid noqon doona ka baxsan socday. Hubi cimilada ka hor iyo keenaan oo ay la socdaan wax kasta oo laga yaabaa in aad u baahan tahay, sida muraayadaha ama dalad.
Aragtida The Right: Waxaa muhiim ah in ay qaadato aragti wanaagsan, iyo in ay diiran oo saaxiibtinimo qof kasta oo aad la macaamilaan wareysiga aad. Xusuusnow, qof walba wuxuu noqon doonaa in aad qiimeynta iyo qaadashada note of sida aad naftaada taabta oo la macaamilaan iyaga la iyo sidoo kale kale oo la wareystay.
luqadda jirka Your inta lagu guda jiro waraysiga waa sida ay muhiim u awoodda aad u dejinayaan jawaabo caqli iyo iyaga hadal muujiyaan inay ku waraysanaya(s). Waxaad u baahan tahay in si fiican loo diyaariyo iyo dhaqmaan sida aad isu gaadhsiisaan in waraysanaya(s) iyada oo afka jirkaaga. Si toosan u fadhiiso oo ay leeyihiin qaab fiicanna. Isku day in aadan qabto wax caadooyinka neerfaha sida gacan baaxaa, foot, ama weedho cajiib wajiga.
Fiiri galay waraysanaya(s) indhaha, haddii aad ku raaxo ama aad ilowdo waxa aad leedahay ka dibna tababar hadlaya qof halka eegaya mid ka mid ah dhegaha ugu jiray. Mararka qaarkood marka aan raadinayey galay indhaha dadyowga qaar intii waraysiga lagu matalaad ah, waan iska illoobaa lahaa waxa aan la hadlayo ku saabsan ama in la yidhaahdo, iyo sidaa darteed waxaan eegi doona dhegaha ugu jiray halkii iyo weligaa ninna sheegi karaa farqiga u.
Waxaad u baahan tahay in aad naftaada u ahaan inta lagu guda jiro waraysiga, qof kasta uu leeyahay iyo waa run. Dheelli daacadnimo leh in ay is-hoosaysiiya. Ha is kibriya oo dhibsado. Noqo daacad ah iyo dareen. Ha odhan Heedhe ama wax erayada kale filler. Ha la hadal deg deg ah, qaadan labaad dejiyo fikradahaaga iyo jawaabaha ka hor ka jawaabidda su'aalaha. Waa caadi inaad u sheegto waraysanaya(s) in aad u baahan tahay daqiiqad haddii loo baahdo halka jawaabaya su'aalaha, laakiin ma yara muddo dheer ka dib markii ay weydiisaa su'aasha ah, oo kaliya dhowr ilbiriqsi ururin fikirkaaga dejiyo jawaab tayo leh.
Just nasato wareysiga aad, aan loo baahnayn in la kor u shaqeeyay oo aynu dareemayaasha aad aad ku biiray inta lagu guda jiro waraysiga. Haddii aad hesho habdhiska ama aad dareento in aad helayso welwelina ka dibna u neefso dhowr qoto dheer qaadato iyo nasato. Qaado saddex Neef qoto dheer sanka iyo si tartiib tartiib neefta siidaysid. Tani waa mid ka mid ah waxyaalaha ugu waxtar leh in ay sameeyaan si aad naftaada dejiyaan iyo naftaada aad u hesho gacanta. Isku day oo eeg sida ay u shaqayso kuu.
Anigu waxaan iyada u sheegay in ka hor iyo mar kale ayaan u sheegi doonaa, noqon xirfadeed; mar walba iyo meel walba inta lagu guda jiro waraysiga. Ilkaha waa xirfad xirfadeed iyo dugsiyada ilkaha rabto oo kaliya dadka xirfadleyda ah ee dugsiga. Mihnadda ayaa la filayaa in wax walba, lugu daro: aad aragti, aad dharka, hadalkiinnu, aad Sanherdin, iyo isdhexgalka aad la dadka.
Dharka inuu soo jiito halka aad waraysiga. Dharka ganacsi u lebbisan xirfadeed. Raggu waa xirto suudh ama jaakad iyo xerin. Haweenku waa inay xirtaan joog ama ka banneeyey iyo jaakad. Ha xiran, dacwana olaga-midab ama wax ka badan hogaanka. waxaa Hayso baalaha!
Waxaan aad soo jeedin lahaa isagoo wareysi ku majaajiloodaan ka hor waraysigaaga dhabta ah. Practice, dhaqanka iyo dhaqanka. In badan oo aad ku dhaqmaan jawaabaya nooca su'aalo la iska weydiin karaa inaad inta aad waraysiga raaxo badan aad u noqon doonaa wareysiga aad dhabta ah. awoodda aad u dejinayaan fikirkaaga iyo ka jawaabaan su'aalo kor u qaadi doontaa sidoo kale luqada jirka iyo hubi samaynta in aad wax ku ool ah la xidhiidhka waraysanaya iyo helitaanka ee guud ahaan dhibcood in aad rabto in ay xoogga saaraan adiga kugu saabsan.
Calan wareysi ku majaajiloodaan la format wareysiga isla waxaad yeelan doontaa si aad u wareysi dhabta ah. Saaxiib ama xubin qoyska fal sida waraysanaya kuu. Ama haddii aad qabto helitaanka a xafiiska xirfadiisa hay'ad aad undergraduate, laga yaabaa in aad rabto in aad jadwal kulan la-taliye xirfad wareysi matalaad ah.
Xafiisyada caafimaadka-Pre caadi ahaan waxay leeyihiin qaar ka mid ah khayraadka iyo sidoo in aad isticmaali karto si ay u diyaariyo waraysi. Kuwaas oo laga yaabo in adeegyada online in laguu ogolaado in aad si waraysiyo matalaad ah shirkadaha udiyaarin waraysi ama waxay noqon kartaa buug oo bixiya talooyin waraysiyada. Ka hubi xafiiska caafimaadka pre-si aad u aragto waxa ay leeyihiin oo ay ka faa'iidaystaan ​​khayraadka kasta oo aad ku heli kartaa gacmahaaga. Sidoo kale, hubi in aad baadhid khayraadka hoos ku qoran caawimo diyaarinta wareysigaaga.
iPrep ilkaha waa dugsi ilkaha shirkad online udiyaarin waraysi. Waxay yihiin shirkad ugu horeeysa dugsiga ilkaha udiyaarin wareysi dalka iyo caawin ku saabsan 400 ardayda pre-ilkaha iyo ilkaha caalamiga ah sanad kasta loogu diyaariyo wareysiga dugsiga ilkaha. Waxay leeyihiin a 97% heerka guusha ee helitaanka macaamiishooda dugsiga ilkaha. Waxay bixiyaan saddex baakadaha kala duwan laga bilaabo $150 – $350. Waxa hubaal ah oo aan cheap, laakiin haddii aad u baahan tahay caawimaad ah ka dibna ay si xaqiiqo ah aad diyaarin kartaa oo aad tusto sida loo Ace aad wareysiga dugsiga ilkaha.
Faraqa kaliya ee u dhexeeya saddex baakadaha waa tirada fadhiyada wareysi iyo faragelinta matalaad ah in aad hesho waxa la. Xirmada Aasaasiga ah ku siinayaa hal wareysi matalaad ah habka la mid ah khubarada wareysi iyo hal kulan kusoo gaabiyey warcelin ka dib wareysiga aad tijaabada ahayd. Xirmada Advanced ku siinayaa labo kalfadhi oo ah nooc kasta oo, iyo danbaynti xirmo Ultimate aad u hesho saddex kalfadhi oo ah nooc kasta oo. Xirmada Aasaasiga bilaabantaa $150 iyo xirmo kasta kor u kaco by $100. Waxay sidoo kale bixiyaan call a mintidnimada lacag yar oo aad ku siin doonaa daqiiqadii call a udiyaarin ee la soo dhaafay ka hor waraysigaaga iyo dib u eegidda waxa ay u badan tahay in ay la kulmaan marka aad waraysiga aad.
Wareysiga matalaad ah waa a 30 Wareysi daqiiqadii la kartoo in dugsi kasta ilkaha gaar ah (iyadoo inta badan la weydiiyo su'aalo ku dugsiga in), iyo waxa kale oo ku salaysan tahay dhibcaha DAT codsadaha, GPA iyo Bayaanka shakhsi ahaaneed. Wareysiga matalaad ah waxaa markaas soo raacay by a 45 kulan-yaasha daqiiqadii meesha codsade kasta waxaa macalin ku saabsan sida loo beddelo jawaab kasta si ay u awoodaan si ay u istaagaan soo baxay oo ku iftiimin la awoodooda. liito ee codsiga waxaa sidoo kale ku ool ah sharaxay iyo dib u eegis.
Waxaa ka mid ah adeegyada kale ee laga heli karaa iPrep ilkaha waa waaxda tafatirka war shakhsiyeed halkaas oo tafatirayaasha khabiir kaa caawin macaamiishooda si ay u sameeyaan wax ku ool ah, si fiican u qoran iyo war shakhsi cajiib ah taas oo ka caawisa arjiga taagan oo leh tayadooda oo dhan in dugsiyada ilkaha raadinayso in musharaxa ugu saxsan.
Waxa ay dhawaan iskaashi la sii xoojinta DAT, taas oo ah buug ka mid ah dhaqanka su'aalo for cilmiga qaybaha DAT ah. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 5 imtixaanada dhaqanka, mid kasta oo ka kooban 40 Biology, 30 Chemistry Guud, iyo 30 su'aalo Chemistry Organic. Buuga waxaa qoray khubaro in ka badan dhaliyay 25 on DAT ah. Buuggu wuxuu sidoo kale bixisaa xal faahfaahsan su'aal kasta talooyin iyo tilmaamo ku saabsan sida si ay u weeraraan su'aalo la mid ah oo ku saabsan DAT ah.
Fikradda ah iPrep ilkaha waa in aqoonsiga tacliimeed kuma filna dambe in aad hesho dugsiga ilkaha. Haddii aan wareysi xoog leh halkaas oo aad maamuli in ay ka soo taagan, u badan tahay in lagu rakibaa on aad “liiska sugida”. Waxay macalin ardayda ku saabsan sida in ay ka jawaabaan xitaa ugu adag, su'aalo cabsi sida waafaqsan waxa dugsiyada ilkaha raadiyo in musharaxa ugu saxsan. khubaro waa dadka oo dhan in laga aqbalay dugsiyada kala duwan ee ilkaha iyo aqoon habka ogolaanshaha.
Gold Standard waxay bixisaa DVD ah oo ku saabsan waraysiga oo la mid ah ay DAT ee Xidhmada Buuxi sida wax gunno ah. Waxaa sidoo kale laga iibsan karaa si gooni gooni ah lacag yar. DVD Tani waxaa la abuuray wareysiga dugsiga caafimaadka, laakiin wareysiga dugsiga ilkaha waa mid aad la mid ah iyo DVD noqon kartaa faa'iido inaad. The 100 DVD daqiiqadii ku jira su'aalo wareysi dugsiga ilkaha muunad iyo talooyin wareysiga. Waa wakiil wanaagsan ee waxa aad ka filan karto wareysiga aad iyo sida loo diyaariyo, waayo,.
The Guide Waraysi School Ilkaha waa mid ka mid ah ilaha ugu jaban oo aad ka iibsan kartaa si aad isugu diyaariso wareysi. Just, sababtoo ah waa raqiis ah macnaheedu ma aha ma aha faa'iido leh, tani waa khayraadka weyn oo aan ku talinaynaa lahaa, isagoo ah hanuuniye ah la awoodi karo inuu kaa caawiyo inaad badan diyaar u ah waraysi.
Waxay bixisaa talooyin la xaqiijiyay iyo tabaha, farsamooyin iyo istiraatijiyo ah diyaarinta wareysiga dugsiga ilkaha. Waa ma aha oo kaliya ayaa kuu sheegi doona sida loo falo xirfad inta lagu jiro waraysiyada dugsiga ilkaha, laakiin aad xooji hababka ugu fiican ee la diyaariyey si wax ku ool naftaada la kala saaro tartamaya. waraysiyo jeesjeesa, dhaqanka su'aalo, iyo hab wareysi gaar ah diyaarinta kaa caawin kara inaad diyaariyo wareysiga.
The Waraysi School Ilkaha Guide caawin kara idinka soocay musharixiinta kale. Hubi in la dhaqan geliyaa waxa qoraaga bara si ay u helaan sida ugu badan uga hagaha. Buuggan waxaad ka dhigi doontaa inay ka shaqayso, laakiin taasi waa sida kaliya ee ay ku dhaqmaan iyo in loo diyaar garoobo waraysi. Waxay kugu caawin doontaa in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan awooda aad ku baran, liitaan, oo gool. Qaar ka mid ah macluumaadka waa aasaasiga ah, laakiin waxaa jira weli waa talo waxtar kitaabkii. Waxaa sidoo kale laga heli karaa on Amazon shidin.
The Waraysi Ilkaha buugga bixisaa dib u eegis lagu kor-to-date of su'aalaha guud jawaabaha buuxa iyo tilmaamo ku saabsan waxa waraysiga ku raadinayso in musharax. Dhacdo la siiyaa kitaabkii si ay u caawiyaan musharax dejinayaan jawaabo caqli in su'aalo la xiriira ilkaha. Waxaa jira su'aalo ku saabsan mawduucyo ay ka mid yihiin: cilmiga ah, anshaxa, shaqada, waxbarasho, ilkaha, iwm. Buuggan waxaa dhab ahaan ku qoran ee codsadayaasha dugsiga ilkaha ee United Kingdom. Ma aha oo dhan ka mid ah su'aalaha iyo macluumaadka la xiriira dugsiyada ilkaha ee dalka Mareykanka. dhibcood badan oo la xiriira, si kastaba ha ahaatee, oo weli laga yaabaa in faa'iido leh in la arko sida su'aalaha iyo jawaabaha waxaa phrased inuu kaa caawiyo samaynta jawaab fiican oo su'aal adag. Waxay noqon kartaa mid waxtar leh, balse xusuusnow in wax kasta kitaabkii Waraysi Ilkaha ma la xiriira.
Waraysi san yahay shirkad online la mid ah iPrep Ilkaha, marka laga reebo inay yihiin shirkad aad u balaaran la shaqeeya shaqsiyaadka waayo, dhammaan noocyada kala duwan ee waraysiyada iyo codsadayaasha dugsiga ma ahan oo keliya ilkaha. Waxay bixiyaan khayraadka in laguu ogolaado in aad in ay ku dhaqmaan jawaabaya su'aalaha adag halka lagu diiwaan on webcam ka dibna kuu oggolaadaan in aad si aad u aragto sida aad u eegay, oo wuxuu sameeyaa inta lagu jiro wareysiga si ay kaaga caawiyaan in aad aad isugu diyaariso wareysi dhabta ah. Ay qalab Wizard Waraysi kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan wareysi caado halkaas oo aad ka mid noqon kara su'aalaha adiga kuu gaar ah, tusaale ahaan jawaabaha, iyo Casharrada. Waxa kale oo aad ka heli kartaa in ay qalab wax abuura biloow si ay u abuuraan aad resume xirfad gaar ah.
Waxay ku siin karaan waxqabadka wanaagsan si loo diyaariyo wareysiga, laakiinse iyagu ma ay bixiyaan gargaar kartoo iyo warcelin in dalabyo iPrep Ilkaha. Xafiisyada caafimaadka pre-badan ayaa si dhab ah u leeyihiin xidhid ah in tam Waraysi sidaa darteed haddii aad markaas nasiib waa laga yaabaa in aad awood u heli for free. Haddii aan ka dibna waxa kale oo aad isku dayi kartaa demo a free khayraadka ay u saxiixay ilaa ay website for Times tijaabo ah.
Waa raqiis ah oo aan u safrin wareysi dugsiga ilkaha. marka hore waxaan u soo jeedin lahaa gaarey baxay si uu qof kasta si aad u ogaataan in magaaladii aad wareysiga oo ay arkeen haddii aad awoodo inaad shil gasho iyaga la adiga oo maqan waa wareysiga aad noqon doonaa. Sidoo kale waxaad ka eegi kartaa adiga oo xafiiska caafimaadka pre-si aad u aragto haddii ay leeyihiin nooc kasta oo diiwaanka ardayda ilkaha hadda in ay yihiin Qalinjabiyeyaasha ee jaamacadda iyo diyaar u yihiin in ay ka caawiyaan ardayda ku hoydo ama gaadiidka waraysiyada. Haddii aad qabto wax nasiib ah kuma qabo mid ka mid ah kuwa ka dibna laga yaabo in ay isku dayaan helo bogga Facebook ah dugsiga ilkaha oo gaarey baxay si uu ardayda ilkaha ee bogga si aad u aragto haddii qof doonaya inuu ku marti for waraysiga. Waxaad sidoo kale toos ula xiriiri kartaa dugsiga ilkaha oo weydii.
Ugu dambayn, haddii aad rabto in aad ka akhrisan qaar ka mid ah jawaab-celin ka soo codsadayaasha ilkaha in la waraystay dugsiyada ilkaha markaas waxaad karaa riix halkan. Tani page on Doctor Ardayda wuxuu bixiyaa jawaab-celin kooban oo ku saabsan waraysiga laga eego codsadaha. Waxaa jira qaar ka mid ah macluumaad waxtar leh la heli karo waxa on, laakiin dhammaantiin ma aha oo gebi ahaanba sax ah.
Inkasta oo ay ahayd waqti dheer, Waxaan rajaynayaa in aad ay awoodaan si ay u helaan macluumaad badan oo wanaagsan out of this post kaa caawinaya in aad diyaariyo wareysiga dugsiga ilkaha. waraysiyo dugsiga ilkaha noqon kartaa waayo aragnimo walbahaar, laakiin aad u badan oo ka dhib yar ka dhigi kartaa by socda talo aan ku qeexan idinku sugan halkan oo kaa caawin doona inaad diyaar u burburin waraysigaaga!
Haddii aad qabto wax su'aalo kale ama talo kasta oo aad la ogaaday in uu waxtar leh in diyaarinta waraysiyada aad, markaa fadlan si xor ah u hoos comment!
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ay Asda wareysiga dugsiga ilkaha:
35 isticmaalaa maanta
Free DAT Qalabka Study